တစ်ဦးကား Nakhon Pathom ငှားရမ်း | တစ်ဦးကားကလပ်ငှားရမ်း
Nakhon Pathom ကားတစ်စီးငှားရမ်း Nakhon Pathom
မော်တော်ကားငှားရမ်း Nakhon Pathom
CHEVROLET COLORADO 4Door
TOYOTA ALPHARD 3.5i (ส่วนบุคคล)
ISUZU MU-X 1.9cc
တစ်ဦးကားကိုငှား Nakhon Pathom
Nakhon Pathom မြို့တော်ဘန်ကောက်၏ရုံ 57kmwest မှာတည်ရှိပါတယ်အလယ်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံအတွက်သမိုင်းကြွယ်ဝသောမြို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါမြို့အရှိဆုံးအထူးသ Phra Pathom Chedi အချို့ 120,5 မီတာမှာကမ္ဘာကြီးကို inthe အမြင့်ဆုံးစေတီတော်ကိုလှပသောယဉ်ကျေးမှု andhistorical ဆွဲဆောင်မှုနှင့်ပြည့်စုံသည်။ အဆိုပါဒေသသည်ထိုင်းအကြားရေပန်းစားသည်နှင့် isincreasingly အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုဖြစ်လာ။ ယင်း၏အများဆုံး famousattraction များထဲတွင်အချို့သောချိန်းတွေ့နှင့်အတူရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်အဖြစ်စောစော 4thcentury ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဧည့်သည်များမှာလည်းဘုရင်က Rama VI ကိုများအတွက် summerresidence ခဲ့သည့် Sanam ချန်းနန်းတော်တစ်ခုခရီးစဉ်ရယူပါ။ ထိုကဲ့သို့သော Wat Phra Ngam နှင့် Wat ဘန် Phra နှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်သည့် citybecomes အဖြစ် andcentury ဟောင်းဘုရားကျောင်းနိုဝင်ဘာလအတွင်း Nakhon Pathom ရဲ့ခမ်းနားဗိမာနျတျောပွဲတော်ကြောင်းမှထည့်ပါ။
အဆိုပါမြို့တစ်နာရီ lessthan အတွက်ဘန်ကောက်ကနေဘတ်စ်ကား, ရထား, သို့မဟုတ်ကားဖြင့်ဝင်ရောက်စေနိုင်သည်။ ခရီးသွားဧည့်အဖြစ်ဒေသခံတွေ, စိတျထဲမှာလွတ်လပ်မှု andcomfort နှင့်အတူ Nakhon Pathom အတွက်တတ်နိုင်ကားအငှားလုပ်ငန်းသုံးစွဲဖို့လိုလားကြပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကားတစ်စီးနှင့်အတူ, သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နှင့်အတူ thecity နှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ရုဇ်နိုင်တော့မည်နှင့်မြို့ withfree အပ်နှံ၏အံ့ဖွယ်ထဲမှာယူရပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံး option ကို Nakhon Pathom အတွက်ဒါပေမယ့်လည်းတိုင်းပြည်အတွင်းရှိသမျှသောအဓိကမြို့ကြီးများနှင့်မြို့ငယ်များတွင်သာရရှိနိုင်သောငှားတဲ့ကားကလပ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
Nakhon Pathom တစ်ဦးငှားရမ်းကားတစ်စီး booking
တစ်ဦးကား Nakhon Pathom ကလပ်ခြော yourtravel အဖြစ်ကောင်းစွာအရသာအဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးဖြည့်ဆည်းလိမ့်မည်ဟုမော်တော်ယာဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းနှင့်အတူ premiumservices ကမ်းလှမ်းငှားရမ်း။ မော်တော်ကားများ၏အကွာအဝေး 4x4s, SUVs, Sedan, Converter နှင့်ပိုပြီးပါဝင်သည်။ အဆိုပါဘွတ်ကင်ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းသောနှင့်ရိုးရိုး visitingthe NakhonPathom ငှားတဲ့ကားကလပ်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုပုံ youcan အလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသည်။ အဆိုပါဘွတ်ကင်အပိုင်းကိုနှိပ်ခြင်းတွင်, သင်ကရရှိလာတဲ့ Drop-down menu ကနေသင့်ရဲ့ကောက်တည်နေရာကိုရွေးဖို့ beprompted ပါလိမ့်မယ်။ input ကိုမှ Besure သင့်ရဲ့သင့်လျော်စတင်နှင့်လက်ျာ billing.With ကားတစ်စီးငှားရမ်း Nakhon Pathom ရမှသကဲ့သို့ရက်စွဲများပြန်လာ, ဘွတ်ကင်ပိုမိုလွယ်ကူဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်သင့်ပရိုမိုကုဒ်ကိုရွေးနှုတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ်ဦးလျှော့စျေးနှုန်း canget ။
Nakhon Pathom အတွက်တည်နေရာတက် Pick
သငျသညျအခြေခံအားဖြင့် inand တမြို့ပတ်လည်ရှိနေရာများတွင်အများစုနေတဲ့ကားတစ်စီးကိုငှားလို့ရပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးပါဝင်သည်
·ဗဟို Nakhon Pathom
· Sanam ချန်းစာတိုက်
· Tanon Songphol လမ်း
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ဥပဒေပြု 21 နှစ်၏ theage အုပ်ဖြစ်ရမည်အားလုံးကို drivers တွေကိုလိုအပ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသူတို့တစ်တွေကားကိုငှားရမ်းသည့်အခါအောက်ပါ ofthe တစ်ခုချင်းစီကိုအပိုင်သေချာစေရန် clients များအားပေး;
အဆိုပါငှားတဲ့ကား Nakhon Pathom ကလပ်အတွက်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများအကြားထွက်ရပ်များနှင့်ဖောက်သည် reliableservices ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် goodcondition အတွက်အားလုံးယာဉ်များဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်ရလဒ်အဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပါဝင်သည်ကားတစ်စီးငှားရမ်းအသုံးပြုခြင်း၏အပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကို;
· 24/7 ဝန်ဆောင်မှု
·တိုင်းအခါသမယ (ကိုယ်ပိုင်နှင့်မိသားစုရည်ရွယ်ချက်) အတွက်သင့်လျော်သောကားများ။
Rentacar Bangkok
Rentacar Chiang Mai
Rentacar Chiang Rai
Rentacar Chon Buri
Rentacar Hat Yai
Rentacar Hua Hin
Rentacar Korat
Rentacar Krabi
Rentacar Lampang
Rentacar Loei
Rentacar Mae Sot
Rentacar Nakhon Pathom
Rentacar Nakhon Si Thammarat
Rentacar Nonthaburi
Rentacar Pattaya
Rentacar Phuket
Rentacar Rayong
Rentacar Roi Et
Rentacar Surat Thani
Rentacar Trang
Rentacar Ubon Ratchathani
Rentacar Udon Thani
Rentacar Thailand
Rentacar Samui
RentaCar Club သငျသညျကားပိုင်ရှင်များထံမှတိုက်ရိုက်ကားများငှားမယ့်ကုန်အံ့။
ဒါဟာဖော်ရွေလုံခြုံပြီးအပြည့်အဝထိုင်းနိုင်ငံ၏မျှသောသူသည်အထဲကယုံကြည်စိတ်ချအာမခံမိတ်ဖက် Viriyah နေဖြင့်အာမခံထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ 1 အာမခံပေးသူ။
သင်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျှင်သင်သည် Pre-ဆောင်စိစစ်ပြီးငှားရမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလပ်မှ RentaCar Club ပေါ်မှာထွက်ငှားလို့ရပါတယ်။
64/70 Moo 12 Thepprasit Rd.
099 1212 012
© Copyright 2021. All rights reserved. Powered By